Olan’ny fampianarana ambony: manoka-baravarana ho an’ny Seces ny minisitera | NewsMada
Olan’ny fampianarana ambony: manoka-baravarana ho an’ny Seces ny minisitera
Marimaritra iraisana hatrany. “Tsy maintsy manova isika ary vonona hiova… Hojerena miaraka ny olana ary mifampiresaka hatrany isika. Tsy afa-misaraka ny minisitera sy ny Seces”, hoy ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana momba ny siansa, Felicité Rejo–Fienena tao Arivonimamo, omaly. Tonga teny an-toerana rahateo ny avy amin’ny Seces nasionaly ary nitondra ny fehinkevitry ny fihaonambe nataon’izy ireo tamin’ity herinandro ity. Anisan’izany ireo tambiny samihafa tokony ho azon’izy ireo. Ny tanin’ny oniversite bodoin’ny olona sasany, ny tokony hampiharana ny lalàna… Nambaran’ny minisitra fa mandala hatrany ny fiaraha-miasa ny tenany ary efa mpikambana rahateo teo anivon’ny Seces ka mahalala ny olana. Notaterina tamin’izany koa ny diany tatsy amin’ny Nosy Maorisy niaraka amin’ny filoha Rajoelina.
Fampiharana ny fikarohana momba ny zanakazo…
Nisy ny fifanaovan-tsonia tamin’izany, nanambarany fa tafiditra ao anatin’izany ny resaka vatsim-pianarana sy ny hiitaran’izany hatrany Australia koa. “Miampita tsikelikely ho amin’izany isika. Mbola hojeren’ny teknisian’ny firenena roa tonta ahafahana manatanteraka izany”, hoy izy.
Notanterahina, omaly ny fambolen-kazo ho an’ity minisitera ity. Mazava ny hafatra sy ny lohahevitra : ” Ho rakotra ala i Madagasikara”. Maherin’ny 2 000 ireo zanakazo novolena ary ahitana voankazo sy karazan-kazo 16, toy ny pibasy, ny filao, ny zakarandahy, ny baobab, ny tsiperifery. “Efa fanao isan-taona ny hetsika, tahaka izao, ary hanaovana fampiharana ny fikarohana ny fambolen-kazo. Manara-penitra sy siantifika fa tsy tahaka ny mahazatra ny ataonay”, hoy ihany ny minisitra.